Dr. Tint Swe's Writings: Antibiotics for Acne ဝက်ခြံအတွက် ပဋိဇီဝဆေးများ
၁။ ကျွန်မ အသက် ၃၀ပါ မေးဖျားမှာ ဝက်ခြံပေါက်တာ မနေ့ကငြုပ်သီး ဆီသက်လိုက်တာ အညှော်ဝင်ပြီး ယောင်တတ်လာလို့ တော်တော်နာပါတယ်ဆရာ။ အနာပေါက်နေရင် အညှော်မိလို့ ယောင်လာတာဟာ ဘယ်လိုများ သက်ဆိုင်ပါသလဲဆရာ။
၂။ ဆရာရှင့် သမီးမျက်နှာရဲ့ နှာခေါင်းဘေးနားမှာ ဝက်ခြံပုန်းလားတော့မသိဘူး အကျိတ်လို အဖုလေးထွက်လာပါတယ်။ ရဲနေပါတယ်။ အရမ်းလည်းနာပါတယ်။ ရုတ်တရက်ကြီးထွက်လာပါတယ်။ ဘာဆေးသောက်သင့်ပါလဲရှင့်။ မေးအောက်မှာရော နှာခေါင်းဘေး ပါးနေရာမှာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားပေးပါရှင့်။
၃။ ဆရာ ကျနော်ဝက်ခြံတွေ အရမ်းထွက်နေလို့ပါဆရာ။ ဘာဆေးစားရမလည်းဆရာ။ ဘာအစားစာ ရှောင်သင့်လည်း ဆရာ။ ဝမ်းလည်းအမြဲချုပ်နေတယ်ဆရာ။
၄။ ဆရာရိုသေစွာလေးစားစွာဖြင့် စာထပ်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မအခု ကလေးမွေးပြီးတာ တလနဲ့ ၈ ရက်ရှိပါပြီ။ ဗိုက်ခွဲမွေးပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်လေးလထဲကထွက်တဲ့ ဝက်ခြံက မွေးပြီးတလကျော်မှာ ပိုဆိုးလာပါတယ်။ ထိုင်းဖက်သွားပြီး အရေပြားဆရာဝန်ရှာတော့ လိမ်းဆေးနဲ့ အမောင်စလင် (၅ဝဝ အား) မနက်၂ လုံးည ၂ လုံးသောက်ခိုင်းပါတယ်။ ၂ ပတ်လောက်သောက်ပြီး ဆရာဝန်ထပ်ပြတော့ တလထပ်သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ကလေးကို မိခင်နို့တိုက်တဲ့အတွက် ကလေးအတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဆေးသောက်လဲ ဝက်ခြံအသစ်တွေက ထွက်မြဲပါ။ ပြည်ဖု အကြီးကြီးတွေထွက်ပါတယ်။ နား၊ ပါး၊ မေးစေ့၊ ရင်ဘတ်၊ နောက်ကျောတပြင်လုံး မြင်လို့မကောင်းအောင်ထွက်ပါတယ်။ ထိုင်းအရေပြားဆရာဝန်ကတွေ ၆ လလောက်ကုရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ မိခင်နို့တိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေး ဆက်သောက်သင့် မသင့် အကြံဉာဏ်လေးပေးစေလိုပါတယ်။ ကလေးအတွက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပဲ တခြား ဘာဆေးများသောက်သင့်ပါသလဲ။ လေးစားစွာဖြင့်။
ဆရာဝန်တွေက ညှော်ကို ရောဂါဆိုးစေတာလို့မမြင်။ ရောဂါပိုးကိုသာ သတိထားတယ်။ ဝက်ခြံအတွက် အနာသက်သာဆေးအပြင် ပဋိဇီဝဆေးတွေလိုနိုင်တယ်။ မေးဖျား မေးအောက် ဝက်ခြံပေါက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ မရှိရာတဲ့။ မေး၊ နှာခေါင်းနဲ့ နဖူးမှာ မျက်နှာရဲ့ ဒေါင်လိုက်အလယ်မျဉ်းနားမှာအနာပေါက်ရင် အလွန်နာတယ်။ ဘယ်နဲ့ညာကလာတဲ့ အာရုံကြောလေးတွေ ပေါင်းဆုံရာဖြစ်လို့ ပိုနာတယ်။ ဝက်ခြံရိုးရိုးမှာ ပြည်မတည်သေးပါ။ ပိုးဝင်လာမှာသာ ပြည်တည်တယ်။ ပြည်ရှိရင် ပိုနာတယ်။ ရင်းလို့ ရောင်တယ်။ နီတယ်။ ပြည်မှန်ရင် ပြည်ကိုထွက်အောင်လုပ်ရတယ်။ ပြည်မမှည့်သေးခင် ညှစ်မထုတ်ရပါ။ နောက်ပြန်သက်ရောက်လို့ ပိုဆိုးမယ်။ သွေးပြန်ကြောပိတ်တတ်တယ်။ အဲတာ ညှော်မဟုတ်ပါ။
Antibiotics ပဋိဇီဝဆေးတွေရဲ့ ဝက်ခြံကိုသက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးက (ဗက်တီးးရီးယား) တွေရဲ့ အရေအတွက်ကို သိသိသာသာလျော့နည်းစေတာ ဖြစ်တယ်။ သွေးဖြူဥကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်တာကိုလဲ နည်းစေနိုင်တယ်။ ဝက်ခြံအရည်ထဲမှာ အဆီကိုလဲ လျော့နည်းစေတာမို့ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို သက်သာစေတယ်။ သတိထားဘို့က ဘယ်ပဋိဇီဝဆေးမဆို အမျိုးသမီးတွေမှာ မွေးလမ်းကြောင်း မှိုဝင်တာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးရဲ့ အာနိသင်ကိုလဲ ထိခိုက်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရျိရင် ဆေးရွေးရမယ်။
၁။ Tetracycline (တက်ထွာဆိုက်ကလင်း) ကို အများဆုံး သုံးတယ်။ တခါသောက် 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ ဘယ်လောက် ကြာကြာလဲဆိုတာ အတိအကျ ပြောမရဘူး။ သက်သာတဲ့အထိလို့ အကြမ်းပြောလို့ ရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တခါသောက် 250 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် လျော့နိုင်တယ်။ ဆေးကို အစာမရှိချိန် သောက်တာ ကောင်းတယ်။ အသက် ၉ နှစ်အောက် နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို ဒီဆေးမပေးရဘူး။ အဆင်ပြေတာက ဒီလူမျိုးတွေက ဝက်ခြံဖြစ်တတ်သူတွေ မဟုတ်ကြပါ။
၂။ Erythromycin (အရစ်သရိုမိုင်စင်) ကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။ သူက (တက်ထွာဆိုက်ကလင်း) ထက်သာတာက ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်စဉ်အတွက် ပိုကောင်းတယ်။ အစားနဲ့လဲ သောက်လို့ရတော့ အစားကြီးတဲ့ ငယ်ရွယ်သူတွေနဲ့ ကိုက်တယ်။ တခါသောက် 250 - 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ ပျို့အန်ချင်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေလဲ ပေးနိုင်တယ်။
၃။ Minocycline ဆေးကို ပြီတည်နေချိန်မှာ သုံးရင်ကောင်းတယ်။ အစာနဲ့ဝေးရင် ပိုကောင်းတယ်။ တခါသောက် 50 to 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ ခေါင်းမူး၊ ပျို့-အန်၊ အရေပြားနဲ့ သွားညိုတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
၄။ Doxycycline (တက်ထွာဆိုက်ကလင်း) နဲ့ (အရစ်သရိုမိုင်စင်) သုံးလို့ မထူးခြားသူတွေကို ဒီဆေး ပေးတယ်။ တခါသောက် 50 to 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ အစာနဲ့လဲနီးလို့ ရတယ်။ ပျို့ချင်တယ်။ နေရာင်နဲ့ မတည့်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေကို မပေးပါ။ အထဲကကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ သွားတွေ အရောင်မလှ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေရဲ့ သတ္တိကိုလဲ ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဘို့ တခြာနည်း (Condom, Diaphragm, Spermicide) တခုခုသုံးပါ။
၅။ Clindamycin ဆေးကို တခါသောက် 75 to 150 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ သောက်ဆေးထက် လိမ်းဆေး အဖြစ်သုံးတာ များတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးကတော့ Pseudomembranous colitis, Clostridium difficile အူမကြီးရောင်တတ်တယ်။
၆။ Diane-35 ဆေးထဲမှာ Cyproterone acetate2mg နဲ့ Ethinyl estradiol 0.035 mg ဆေးတွေရောပါတယ်။ Cyproterone ဆေးကို Antiandrogens ခေါ်တယ်။ Ethinyl estradiol ဆေးက အီစထိုဂျင်ဟော်မုန်းဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆိုးဝါးတဲ့ဝက်ခြံအတွက်ပေးတယ်။ တနေ့ ဆေး ၁ လုံး၊ ၂၁ ရက်ဆက်တိုက်သောက်ရမယ်။ ၇ ရက် နားထားရမယ်။ နေ့တိုင်း ဆေးသောက်ချိန်တူရမယ်။ ရာသီလတလ သွေးစဆင်းတဲ့ပဌမနေ့နေစသောက်ရမယ်။ ဝက်ခြံတွေသက်သာလာပြီးနောက်လည်း ၃-၄ လ ဆက် သောက်သင့်တယ်။ ထပ်ပေါက်လာပြန်ရင်ထပ်သောက်ရပါမယ်။ ကြားရက်သွေးနည်းနည်းစွန်းလည်းဆက်သောက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် ဆေးမသောက်ရပါ။ နို့တိုက်မိခင်အတွက် တိတိကျကျတားထားချက်တော့မရှိပါ။ အကျိုးကပိုရင် သောက်နိုင်တယ်။ Cholestatic jaundice အသားဝါရောဂါ ရှိဘူးသူမသောက်သင့်ပါ။ အသည်းမကောင်းသူလည်း မသင့်ပါ။ မျက်စိမှာသွေးကြောရောဂါရှိသူ၊ သွေးခဲရောဂါရှိသူ၊ ရင်သားကင်ဆာရှိသူ၊ ဆီးချို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရှိသူတွေဆေးမသောက်သင့်ပါ။ ဆေးကို တားဆေးအဖြစ်မသုံးသင့်ပါ။ မိုင်ဂရင်းရှိသူ၊ သွေးတိုးများသူလည်းသတိထားရမယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ = ရင်သားနာ၊ အရေပြားမှာ အညိုစက်ဖြစ်၊ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်၊ လိင်စိတ်ပြောင်း၊ ပျို့၊ အန်၊ ခြေထောက်ရောင်၊ မောပန်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်း။
Acne writings ဝက်ခြံစာများ
1. Accutane ဝက်ခြံဆေးတမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/accutane.html
2. Acne Antibiotics ဝက်ခြံအတွက် ပဋိဇီဝဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/acne-antibiotics.html
3. Acne Laser treatment ဝက်ခြံကို လေဆာ နဲ့ ကုသခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/acne-laser-treatment.html
4. Acne question ဝက်ခြံမေးခွန်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/acne-question.html
5. Acne Scars ဝက်ခြံအမာရွတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/acne-scars.html
6. Acne vulgaris ဆိုးတဲ့ ဝက်ခြံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/acne-vulgaris.html
7. Acne ဝက်ခြံ ရောင်စုံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/acne.html
8. Dermavive ဝက်ခြံဆေးဆပ်ပြာ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/07/dermavive.html
9. Diane-35 တားဆေး ဝက်ခြံအတွက်လည်းပေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/diane-35.html
10. Seborrheic Keratosis or Keratosis pilaris ဆားဝက်ခြံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/seborrheic-keratosis-or-keratosis.html
11. Thigh Acne ချိုင်းနဲ့ ပေါင်မှာပေါက်တဲ့ ဝက်ခြံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/thigh-acne.html
▼ 2017 (3356)
ဇွန်လ (၁) ရက်ဖွါး
2015 global HIV statistics
Overdue pregnancy ရက်ကြာနေတဲ့ကိုယ်ဝန်
Dead Languages ကွယ်လွန်သွားတဲ့စာများ
လျှံ လျှပ် လျှာ
Pregnancy Spelling သတ်ပုံမှားသော မီးနေသည်များ
Contraceptive Implant ကိုယ်ဝန်တားဆေးချောင်းနဲ့ လက်...
Leukemia လူကီးမီးယား သွေးကင်ဆာ
Omega-3 and Pregnancy အိုမီဂါ နှင့် ကိုယ်ဝန်
အရုဏ် နှင့် အာရုံ
Septic Shock ဆက်ပတစ်ရှော့ခ်
ရုပ် နှင့် ရုတ် ဖျန်း နှင့် ဖြန်း
Scared ကျွန်တော့်ကို ကြောက်တဲ့သူရှိတယ်
Wooden Sling Shot ဘတ်ခွ
Purple Sunbird နှံပြီစုတ်ငှက်
ရဟန္တာစာလုံး ဘာတုံးတော့ မသိ
Thank You မြင်းမြီးတဆုပ်
ယခင် နှင့် ယခု
Subsidy Politics ပါမစ်နိုင်ငံရေး
Betel Teeth ကွမ်းသွား
How much to reveal ဘယ်အထိဖေါ်မလဲ
The strongest armies in the world ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စ...
Mango tree ပါရမီရပ်က သရက်ပင်
Two Chapters ချပ်ပတာ နှစ်ခု
1990 Anniversary ၁၉၉ဝ မှာ ပါခဲ့တယ်
Steroid injections စတီရွိုက်ထိုးဆေး
UK achieves solar power record ယူကေနှင့် နေ
Baby Sex Determination အထီး-အမ ပြင်မရပါ
Pregnancy and Conception ကိုယ်ဝန်စရှိတယ်ဆိုတာ
Vaccines and Pregnancy ကိုယ်ဝန်နဲ့ ကာကွယ်ဆေးများ
Crude Nationalism အကြမ်းစား အမျိုးသားရေးအယူအဆ
Fruit Catcher ချူ နဲ့ ခြူ
Genital warts လိင်လမ်းကြွက်နို့
ရှဲ နှင့် ရှယ်
Diet forabreastfeeding mom နို့တိုက်မိခင် စားသင်...
Diet for breastfeeding mother နို့တိုက်မိခင် ဘာစား...
Chances of passing G6PD on to kids
Duty Coat ဆရာဝန်ဂျူတီကုတ်
Emotional changes during pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဥ...
Health Democracy မိဘတွေသဘော
Under-5 Children Mortality ၅ နှစ်အောက်ကလေး သေဆုံးမှု
Bacteria and our Body လူ့ကိုယ်နဲ့ ပိုးမွှား
ဓါ နှင့် ဓာ
Manchester Operation မန်ချက်စတာ အော်ပရေးရှင်း
Thalassemia သာလာဆီးမီးယား သွေးအားနည်းရောဂါ
God gave my son autism as punishment for my aborti...
Pregnancy at 20, 30, 40 ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆေ...
The navel ဘယ်သူ့ချက်လဲ
Dress code ခါးတောင်ကြိုက်ယူနီဖေါင်း
Incomplete Questions တပိုင်းတစ မေးကြသူများ
တယ် တရ် ဘာ
Pregnancy Questions ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေးခွန်းများ
Friendship Day ကနေ့ဘာနေ့လဲ
Just 14-year ၁၄ နှစ်သမီး
Healthy Habits ဘယ်လမ်းရွေးမလဲ
Teenage pregnancy အသက်ငယ်ငယ် ကိုယ်ဝန်လွယ်
Sex education in schools လိင်ပညာ ကျောင်းတွေမှာ ဘယ်...
Puberty Education for Kids အရွယ်ရောက်ခြင်းအကြောင်း
Sex Education for Kids ကလေးသူငယ်တွေအတွက် လိင်ကျန်း...
Early Experience အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ လိင်အတွေ့အကြုံရှိခြင်း
Amenorrhea (2) ရာသီမလာရင် (၂)
Crow Pheasant ရွှေဘုတ်ကယ်အိုးအီ